पुँजीवादी प्रेम र यौनको अतिरञ्जना
समाज विपरीत लिंगबीचको सम्बन्धबाट निर्मित छ । यो नियम मानव समाजमा पनि लागू हुन्छ । विपरीत लिंगीबीचको सम्बन्धका बहुआयाम छन् । यौनसँगै प्रजनन, सहजीवन र सामाजिक जीवनका लागि विपरीत लिंगीबीचको आकर्षण र सम्बन्ध अनिवार्य छ ।
समाजको विकाससँगै प्रेम, यौन, प्रजनन र सहजीवनलाई बुझ्ने एवं भोग्ने शैलीमा परिवर्तन आएको छ । मूलतः मेसिन, कारखाना, उद्योगधन्दा, बजार, शिक्षण संस्थालगायतको विकासपछि विपरीत लिंगीबीचको सम्बन्ध वैधानिक जस्तो भयो । अर्थात् पुँजीवादी समाजको विकास क्रमसँगै प्रेम र यौनका विषय खुल्दै गए । त्यसअघिको सामन्तवादी समाजमा महिलालाई घरभित्रै थुन्ने वस्तुजस्तो बनाएको थियो ।
पुँजीवादले मानिसमा सामूहिकताको विकास गर्यो । विभिन्न जात, भाषा र धर्मका मान्छेलाई आफ्नो समूहमा भेला गरिदियो । जसले महिला पुरुषको यौनजीवनसँगै सम्बन्धको नयाँ परिभाषा र थप आयामको खोजी भयो । सम्बन्धका लागि महिलाले पुरुष र पुरुषले महिला रोज्ने स्थिति सिर्जना भयो ।
हिजो सामन्तवादमा महिला पुरुषको सहयोगी अर्थात् दोस्रो दर्जाको मान्छे ठानिन्थ्यो । हुन त पुँजीवादअघि पनि विवाहका विभिन्न प्रणाली थिए । मागी विवाह नै मुख्य थियो भने लुटी विवाह पनि प्रचलनमा थियो । त्यस्तै, थोरै मात्रामा भागी विवाह पनि हुन्थ्यो । भागी विवाहले आपसी प्रेमलाई दर्साउँथ्यो । तर, त्यतिबेला भागी विवाहलाई प्रेम मानिँदैनथ्यो । अहिले भागी विवाहलाई प्रेम विवाह मान्ने गरिन्छ ।
रोज्ने चलनसँगै छाड्ने चलनको विकास भयो । यसले स्वतन्त्रताको संकेत गर्छ । भनिन्छ, प्रेम अमर हुन्छ । तर, विपरीत लिंगीबीचको प्रेम मान्छेको मृत्युसँगै सकिन्छ ।
कोही कोही मानिस प्रेममा विछोड भएपछि मर्ने या बहुलाउने गर्छन् । त्योचाहिँ भावुकता हो । विछोड हुँदा प्रेमको अनुरागमा भावनात्मक चोट पर्ला । तर, जिन्दगी नै सकियो भन्ने होइन । किनकि, त्यसअघि पनि धेरैको प्रेम भएको थियो । धेरैको विछोड भयो होला । प्रेम र विछोड भावनात्मक कुरा हो । यौन प्राविधिक विषय ।
प्रेम, यौन र समाज
जैविक एवं वैज्ञानिक नियम नै हो कि विपरीत लिंगी आपसमा आकर्षित हुन्छन् । नहुनेहरु बिरामी हुन् । अझ किशोरावस्थामा मान्छेहरु छिटो विपरीत लिंगीप्रति आकर्षित हुन्छन् किनभने उनीहरु छिटो भावनात्मक हुन्छन् । किशोरावस्थामा शरीरका अंग र हर्मोन परिपक्व हुँदै जाने भएकाले पनि विपरीत लिंगीप्रतिको चाह बढ्नु स्वाभाविक हो ।
आकर्षित हुने पनि विभिन्न चरण हुन्छन् । संवादको चरण होला । स्पर्शको चरण होला । त्यस्तै, विचार र रुचिको विषयले पनि आपसमा आकर्षित गर्छ । यसर्थ, शारीरिक आकर्षण मात्रै आकर्षण होइन ।
विचार र रुचि मिलेपछि संकल्पको समय आउँछ । त्यसपछि समर्पणको बेला आउला । यो अर्थमा जीवनमा धेरैसँग आकर्षित भइन्छ । धेरैसँग प्रेम हुन सक्छ । तर, हामीले प्रेम र आकर्षणलाई यौन र सहजीवनसँग मात्रै जोडेर हेर्ने गर्यौं ।
प्रेमलाई हेर्ने नजर नै गलत
वास्तवमा बलात्कारचाहिँ यौन होइन, अत्याचार हो । शारीरिक रुपमा गरिने अत्याचार । तर, कतिपयले बलात्कारलाई यौनसँग र यौनलाई प्रेमसँग जोडेर हेर्ने गरेको पाइन्छ । जुन गलत नजर हो ।
प्रेम अनुभूति गर्ने कुरा हो । यसर्थ, यसलाई ज्यादा गम्भीर विषय बनाउन जरुरी छैन । विपरीत लिंगीबीच आकर्षित भएर गरिएको प्रेम टुट्यो भने पनि सामान्य कुरा हो । प्रेममा विछोड हुनु एउटा औसत दुर्घटनाचाहिँ अवश्य हो ।
दुर्घटनामा एउटा अंगमा चोट लाग्यो भन्दैमा जीवन नै खेर फाल्न त सकिँदैन नि । संसारमा प्रेमका कारण हुने भन्दा हजार गुणा बढी दुःख छ । मान्छे मारिएका छन् । करोडौं मानिस शरणार्थी भएर बस्न बाध्य छन् । अर्बाैं मान्छे खान नपाएर मरिरहेका छन् । बाँच्नकै लागि १८ घण्टासम्म श्रम गरिरहेका छन् । त्यो दुःखलाई हेर्यो भने प्रेममा हुने विछोड त सामान्य लाग्छ नि ।
त्यसकारण, मानिसले चिन्तन कस्तो बनाउने भन्ने हो । मानव जातिको महादुःखतिर ध्यान दिन थाल्यो भने यस्ता दुःख सामान्य लाग्छन् । पचाउन सजिलो हुन्छ । विचार निर्माणमा हाम्रो अवधारणा गलत छ । जसका कारण प्रेममा विछोड भएकै कारण मर्ने क्रम बढेको छ । बलात्कार बढेको छ ।
विवाह र समाज
नेपाली समाज जातमा आधारित छ । जहाँ फरक जातबीच विवाह गर्न मिल्दैन भन्ने मान्यता छ । विवाह गरे पनि जात घट्छ । पहिला त फरक जातबीच विवाह गर्नेलाई काटिदिने चलन थियो । मुलुकी ऐनमै त्यस्तो व्यवस्था थियो ।
त्यतिबेला पनि प्राकृतिक रुपमा विपरीत लिंगीबीच आकर्षण हुन्थ्यो । विचार मिलेपछि प्रेम हुन्थ्यो । तर, सहजीवनका लागि जात बाधक बनिदिन्थ्यो । अहिले पनि हाम्रो समाज त्यहाँबाट माथि उठ्न सकेको छैन । यद्यपि, विकास त भएकै छ ।
जात, धर्म र वर्गको जोखिम मोल्ने आँट पछिल्लो पुस्ताका युवाले गरेका छन् । भावना र विचार मिलेपछि युवायुवतीले बिहे गर्न थालेका छन् । यो अवस्थाका लागि पनि थुप्रै संघर्ष भएको छ । यो त्यतिकै भएको होइन । र, अझै धेरै गर्न बाँकी नै छ ।
यौनः प्रेमको केन्द्रीय तत्त्व !
यौन प्रेमको केन्द्रीय तत्त्व नै हो । यसमा ढाँटछल गर्नुपर्ने केही छैन । यौन जीवनलाई व्यवस्थित, सहज र जिम्मेवारपूर्वक सुखमय बनाउनकै लागि नै मन परेको जोडी खोज्नुपरेको हो । तर, त्यो मात्रै चाहिँ होइन । यौनसँग धेरै कुरा जोडिन्छन् । पछि सन्तान उत्पादन हुन्छन् । सन्तान उत्पादन गर्नु भनेको समाज निर्माण गर्नु हो । यसर्थ, यौन र प्रेम व्यक्तिगत कुरा मात्रै होइनन् ।
समाज निर्माणको प्रक्रिया निरन्तर र ठीक हुन जोडीहरु आपसमा सन्तुष्ट हुनुपर्यो । एकले अर्कालाई बुझ्न सक्ने हुनुपर्याे । रम्न सक्ने हुनुपर्यो । नचिनेको मान्छेसँग बच्चा जन्माउनु र चिनेको मान्छेको सहजीवनबाट बच्चा जन्माउनुमा आकाश जमिन फरक छ ।
विवाह भनेको संगठन हो । सँगै, एउटा संस्था पनि हो । पुरानो विवाह प्रणालीले आपसमा छुटिने कल्पना गरेको छैन । पुरुषलाई मस्त स्वतन्त्रता दिएको छ । महिलालाई अनेक नियमका नाममा बाँधिएको छ । यसर्थ, हामीले वैवाहिक संस्थाको संरचना बदल्न जरुरी छ ।
प्रेम र वर्ग
प्रेम र यौनले मानव जीवनसँगै सामाजिक जीवनसँग महत्त्व राख्ने कुरा त प्रस्ट भयो नै । तर, प्रेमलाई तडकभडकका रुपमा लिने प्रचलन छ । अहिले दरबारमार्गमा गएर कफी पिए मात्रै प्रेम हुनेजस्तो भयो । तर, होइन ।
निम्न, मध्यम र सर्वहारा वर्गमा पनि प्रेम हुन्छ । वास्तवमा प्रेम पनि वर्गीय हुन्छ । जात र धर्म जस्तै प्रेमलाई वर्गले पनि प्रभावित पारेको छ । प्रेमको मर्म मारेको छ ।
(शिलापत्रकर्मी पवन बराइलीसँगको कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २५, २०७६, ०८:००:००
पीएचडी गरेपछि कक्षा ४ को जाँच !
प्रेमको प्रतीक गुलाब